မြ၀တီ - နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (၃၅)ကြိမ်မြောက် အာဆီယံထိပ်သီး အစည်းအဝေးနှင့် ဆက်စပ်ထိပ်သီး အစည်းအဝေးများ တက်ရောက်စဉ် ကာလအတွင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့မှုများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သတင်းထုတ်ပြန်
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (၃၅)ကြိမ်မြောက် အာဆီယံထိပ်သီး အစည်းအဝေးနှင့် ဆက်စပ်ထိပ်သီး အစည်းအဝေးများ တက်ရောက်စဉ် ကာလအတွင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့မှုများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သတင်းထုတ်ပြန်
Wednesday, 06 November 2019 09:13 font size decrease font size increase font size
နေပြည်တော် နိုဝင်ဘာ ၅
ထိုင်းနိုင်ငံ ဗန်ကောက်မြို့တွင် ကျင်းပခဲ့သည့် (၃၅)ကြိမ်မြောက် အာဆီယံထိပ်သီး အစည်းအဝေးနှင့် ဆက်စပ်ထိပ်သီး အစည်းအဝေးများသို့ တက်ရောက်ခဲ့သည့် ခရီးစဉ်အတွင်း နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် King Chu-lalongkorn Memoral Hospital ရှိ Thai Red Cross AIDS Research Centreသို့ သွားရောက် လေ့လာခဲ့ပြီး နာယကများဖြစ်ကြသော HRH Princess Soamsawali Korm Muen Suddhanarinatha နှင့် HRH Princess Bajarakitiyabha Narendiradebyavati တို့နှင့် သီးသန့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ထို့ပြင် အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ်ံH.E. Mr. Narendra
Modi ၊ ရုရှားဝန်ကြီးချုပ် H.E.Mr. Dmitry Medvedev နှင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု သမ္မတ၏ အထူးကိုယ်စားလှယ် အမျိုးသားလုံခြုံရေး အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် Mr. Robert O'Brien တို့အား သီးခြားစီတွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့ အကြီးအကဲ Ms.Kristalina Georgievaနှင့် ကမ္ဘာ့ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ Mr. Gianni Infantino တို့အား သီးခြားစီ လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့သည်။
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်သည် Thai Red Cross AIDS Research Centre သို့ ၂-၁၁-၂ဝ၁၉ ရက်နေ့တွင် သွားရောက်လေ့လာခဲ့ရာတွင် HRH Princess Bajarakitiyabha Narendirade-byavati နှင့် ယင်းဌာန၏ တာဝန်ရှိသူများက HIV/AIDS ရောဂါ အသိပညာပေးရေး၊ HIV ဝေဒနာရှင်များ အတွက် ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများပေးအပ်နေမှု အခြေအနေ၊ HIV ရှိ မိခင်များမှ တစ်ဆင့် ကလေးသူငယ်များထံသို့ ကူးစက်မှု လျှော့ချရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ကြသည်။ ယင်းနောက် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်သည် HRH Princess Soamsawali Korm Muen Suddhanarinatha နှင့် HRH Princess Bajarakitiyabha Narendiradebyavati တို့နှင့် HIV ရောဂါကာကွယ် တိုက်ဖျက်ရေးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဆေးဝါး၊ နည်းပညာနှင့် အတွေ့အကြုံများ ဖလှယ်သွားနိုင်ရန်အတွက် မြန်မာ-ထိုင်း နှစ်နိုင်ငံ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားရေး အပြင် အခြားစိတ်ပါဝင်စားသော နိုင်ငံများနှင့် သုံးပွင့်ဆိုင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားနိုင်မည့် အလားအလာများအပေါ် ဆွေးနွေးအမြင် ချင်းဖလှယ်ခဲ့ကြသည်။ ဆက်လက်၍ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်သည် အဆိုပါ Centre မှ ဖွင့်လှစ်ထားသည့် HIV/AIDS တားဆီးကာကွယ် တိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာ ပြခန်းအတွင်း လှည့်လည်ကြည့်ရှု လေ့လာခဲ့သည်။
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ် H.E.Mr. Narendra Modi တို့ ၃-၁၁-၂ဝ၁၉ ရက်နေ့တွင် တွေ့ဆုံရာ၌ နှစ်နိုင်ငံ ဆက်ဆံရေး ပိုမိုတိုးတက် ခိုင်မာလာစေရေး၊ ကုန်သွယ်ရေး၊ ပို့ဆောင်ရေး၊ ကုလားတန်ဘက်စုံသုံး စီမံကိန်း၏ အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုဖြစ်သည့် စစ်တွေဆိပ်ကမ်းအား ဆောလျင်စွာအသုံးပြု လည်ပတ်သွားနိုင်ရေး၊ မြန်မာ-အိန္ဒိယ နှစ်နိုင်ငံအကြား ကျန်ရှိနေသည့် နယ်နိမိတ် သတ်မှတ်နိုင်ရေး၊ နှစ်နိုင်ငံအကြား မော်တော်ယာဉ်များ သွားလာမှုဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ် ဆောလျင်စွာ လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ရေး၊ ရမည်းသင်း အမျိုးသမီး ရဲသင်တန်းကျောင်း အဆင့်မြှင့်တင်ရေး၊
ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းများ၏ စွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေးနှင့် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကိစ္စရပ်များအပါအဝင် နှစ်နိုင်ငံအကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ ပိုမိုတိုးချဲ့ ဆောင်ရွက်သွားရေး၊ နှစ်နိုင်ငံအကြား အဆင့်မြင့် ခရီးစဉ်များ အပြန်အလှန် စီစဉ်သွားနိုင်ရေး၊ ရခိုင်ပြည်နယ် အရေးကိစ္စတွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံ အနေဖြင့် အပြုသဘော ဆက်လက်ကူညီ ပံ့ပိုးသွားရေးနှင့် အာဆီယံ-အိန္ဒိယ အကျိုးတူပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ အမြင်ချင်းဖလှယ် ဆွေးနွေးခဲ့သည်။
ရုရှားဝန်ကြီးချုပ် H.E. Mr. Dmitry Medvedev နှင့် ၄-၁၁-၂ဝ၁၉ ရက်နေ့တွင် တွေ့ဆုံစဉ် မြန်မာ-ရုရှား ရှိရင်းစွဲချစ်ကြည် ရင်းနှီးမှု ပိုမိုတိုးတက်ခိုင်မာစေရေး၊ စွမ်းအင်၊ စက်မှု၊ မြို့ပြလေကြောင်း၊ ပညာရေးကဏ္ဍများ အပါအဝင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ပိုမို တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်သွားရေး၊ မြန်မာ-ရုရှား ကုန်သွယ်ရေးနှင့် စီးပွားရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ပူးတွဲကော်မရှင် အစည်းအဝေးကို နေပြည်တော်၌ ကျင်းပသွားရေး၊ အဆင့်မြင့် ကိုယ်စားလှယ်များ အပြန်အလှန် လည်ပတ်ရေးနှင့် နိုင်ငံတကာ မျက်နှာစာတွင် ဆက်လက်၍ နီးနီးကပ်ကပ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားရေး ကိစ္စရပ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ အမြင်ချင်းဖလှယ် ဆွေးနွေးခဲ့သည်။ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်
က မြန်မာကျောင်းသားများ ပညာသင်ဆု ပိုမိုတိုးမြှင့်ရရှိရေး၊ ပြည်သူအချင်းချင်း ထိတွေ့ဆက်ဆံမှု ဆက်လက်မြှင့်တင်သွားရေးနှင့် နှစ်ဖက်အကျိုး ဖြစ်ထွန်းစေမည့် ကုန်သွယ်ရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု မြှင့်တင်ရေးနှင့် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာနများ အကြား ပိုမိုနီးကပ်စွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို ထည့်သွင်း ဆွေးနွေးခဲ့သည်။
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နှင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု သမ္မတ၏ အထူးကိုယ်စားလှယ်၊ အမျိုးသားလုံခြုံရေး အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် H.E. Mr. Robert O'Brien တို့ ၄-၁၁-၂ဝ၁၉ ရက်နေ့တွင် တွေ့ဆုံရာ၌ မြန်မာ-အမေရိကန် နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေး ပိုမိုတိုးတက် ခိုင်မာလာရေး၊ မူးယစ်ဆေးဝါး၊ လူကုန်ကူးမှုနှင့် တောရိုင်းတိရစ္ဆာန် တရားမဝင် ရောင်းဝယ်မှု တားဆီးကာကွယ် တိုက်ဖျက်ရေး၊ ကောင်စစ်ရေးရာ ကိစ္စရပ်များ အပါအဝင် နှစ်နိုင်ငံ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ ဆက်လက်တိုးမြှင့်သွားရေး၊ မြန်မာအစိုးရအနေဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ်မှ နေရပ် စွန့်ခွာသူများအား နှစ်နိုင်ငံ သဘောတူစာချုပ်နှင့် အညီ ပြန်လည်စိစစ်လက်ခံရေး အတွက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေမှု၊ ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သည့် UNHCR ၊UNDP တို့နှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နေမှု အခြေအနေများအပြင် ဒေသတွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာရေးရာ အကျိုးတူ ကိစ္စရပ်များအပေါ် ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ အမြင်ချင်းဖလှယ် ဆွေးနွေးခဲ့သည်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငွေကြေးရန်ပုံငွေ အဖွဲ့(IMF)၏ အကြီးအကဲဖြစ်သူ Ms. Kristalina Gerogieva အား ၃-၁၁-၂ဝ၁၉ ရက်နေ့တွင် လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ယင်းသို့တွေ့ဆုံရာတွင် IMF မှ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ငွေကြေးနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ နည်းပညာ အကူအညီများ ဆက်လက် ပေးအပ်သွားရေး၊ ဈေးကွက်စီးပွားရေးနှင့် ဘဏ်လုပ်ငန်းများ ထွန်းကား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ ဘဏ်လုပ်ငန်း စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်လာရေး၊ ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ် ပြောင်းလဲကျင့်သုံးစ နိုင်ငံများ၏ ငွေကြေးနှင့် ဘဏ္ဍာရေး ကဏ္ဍအတွေ့အကြုံများ၊ အကောင်းဆုံး လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ဖလှယ်သွားရေးနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ အသွင်ကူးပြောင်းဆဲ ကာလအတွင်း ကြုံတွေ့နေရသည့် စိန်ခေါ်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ အမြင်ချင်း ဖလှယ်ဆွေးနွေးခဲ့သည်။
ကမ္ဘာ့ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ Mr.Gianni Infantino အား ၃-၁၁-၂ဝ၁၉ ရက် နေ့တွင်လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဘောလုံးအားကစား ကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ မြန်မာအမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ဘောလုံး အားကစားသမားများ၏ အားကစား စွမ်းရည်မြင့်မားလာရေး၊ လူငယ်များအကြား ဘောလုံး အားကစားနည်းနှင့် ပိုမိုအကျွမ်းတဝင် ရှိလာရေး၊ ဘောလုံးနည်းစနစ်များ၊ ဘောလုံးအကယ်ဒမီများ၏ အရည်အသွေးမြှင့်တင်ရေး၊ ကမ္ဘာ့ဘောလုံး အဖွဲ့ချုပ်နှင့် အားကစားနှင့် ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးဌာနတို့အကြား ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သွားရေးနှင့် ကမ္ဘာ့ဘောလုံးသမား အကျော်အမော်များ မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်၍ မြန်မာလူငယ်များနှင့် တွေ့ဆုံမှုများ ပြုလုပ်သွားရေး ကိစ္စရပ်များအပေါ် ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ အမြင်ချင်းဖလှယ်ခဲ့သည်။ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က ကမ္ဘာ့ဘောလုံး အဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌအား မြန်မာလူငယ်များအကြား အားကစားအပေါ် ပိုမိုစိတ်ဝင်စား လာစေရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် ကိုက်ညီသည့် လူနေမှုပုံစံ ဖြစ်ပေါ်လာရေး၊ အသင်းအဖွဲ့စိတ်ဓာတ် ပိုမိုရှင်သန် ထွန်းကားလာရေးနှင့် မြန်မာ့ဘောလုံး အဆင့်အတန်းအား ယခင်ကဲ့သို့ အာရှထိပ်တန်းအဆင့်သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိရေးအတွက် ကမ္ဘာ့ဘောလုံး အဖွဲ့ချုပ်မှ ကူညီပံ့ပိုးပေးရန် အလေးထား ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာန၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် အရ သိရသည်။
Read 44 times Last modified on Monday, 11 November 2019 18:36
More in this category: « Domestic-based foreign media and local media collect news on Hindus mercilessly murdered by extremist Bengali terrorists ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ၏ ကထိန်သင်္ကန်း ဆက်ကပ် လှူဒါန်းပွဲကျင်းပရေး ဦးစီးကော်မတီ လုပ်ငန်း ညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးကျင်းပ »